Hlaholská vyhlídka - elepụ anya kachasị elu nke Prachovské skal. Ọ bụ nlele nke abụọ site na nbata ọnụ ụzọ Branka. A na-enweta aha ya site na nleta Prague Hlahol Choir, nke ndị otu ya bịara na nkume ahụ na 1887. Site na Hlaholská vyhlídka enwere echiche nke Krkavčí skal, Přivýšina, Jinonické na ọdọ mmiri nke Tábor, Bradlec na Kumburk ugwu. Ihe nrịba ama sitere na akara ndi njem nlegharị anya.
Elekere Prachovské Rocks kacha elu (460 m). Akpọrọ ya aha mgbe ukwe Hlahol na Prague, nke gara Pachovské skály na 1887. Nlele anya na-enye echiche nke ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ.
Czech Paradise Igwu Echiche Glagolitic Prachovské skály crossroad ntinye aka pointer -ele ihe anya
Tags: Czech Paradise Igwu Echiche Glagolitic Prachovské skály crossroad ntinye aka pointer -ele ihe anya
Ọnọdụ: 506 01 Holín, Czech Republic